YEYINTNGE(CANADA): Monday, September 02
ယင်းသို့ သတ်မှတ်ရာတွင် မြို့နယ်အလိုက် တစ်ပေပတ်လည်အား မြေဈေးနှုန်း သတ်မှတ်ပေးမည်ဖြစ်ပြီး အရောင်းအ၀ယ် ပြုလုပ်တိုင်း အစိုးရသို့ ပေးဆောင်ရမည့် တံဆိပ်ခေါင်းခွန်ကို အပြည့်အ၀ ရရှိစေရန် လုပ်ဆောင်ရခြင်းဖြစ်ကြောင်း ၎င်းကပြောကြားသည်။ မြို့နယ်အလိုက် 1 sqm သတ်မှတ်ရာတွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့၏ ကူညီမှုဖြင့် လုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ပြီး မြေနေရာ ပေါက်ဈေးနှုန်းများကိုမူ အကြမ်းဖျင်း သတ်မှတ်ပြီးဖြစ်ကာ ညှိနှိုင်းလုပ်ဆောင် နေဆဲဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ဆက်လက်ပြောကြားသည်။
"အခု အရောင်းအ၀ယ်လုပ်တဲ့ အခါမှာ ၁၀၀ ဖိုးအတွက် အခွန်က ခုနစ်ကျပ် ကပ်ရမှာကို ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ ၁၀၀ ဖိုး အရောင်းအ၀ယ် လုပ်တာကို ၅၀ နဲ့ လုပ်တယ်ပြောပြီး အခွန်ကို သုံးကျပ်ခွဲပဲ ဆောင်တယ်။ နိုင်ငံတော် အနေနဲ့ အခွန်နစ်နာတယ်။ အခု သတ်မှတ်တာကလည်း တံဆိပ်ခေါင်းခွန် အတွက်ပဲ သတ်မှတ်တာပါ။ ဥပမာ-၀င်ဒါမီယာမှာ အရောင်းအ၀ယ်ဖြစ်ရင် ၁ ပေပတ်လည်ကို ၁၀၀ ဆိုရင် ၁၀၀ ဖိုးအတွက် အခွန်ဆောင်ရမယ်။ မြောက်ဒဂုံမှာ တစ်ပေပတ်လည်ကို ၂၀ ဆိုရင် ၂၀ အတွက် အခွန်ဆောင်ရမယ်။ သူ့ဟာသူ လျှော့ပဲရောင်းရောင်း၊ တိုးပဲရောင်းရောင်း သတ်မှတ် တစ်ပေ ပတ်လည်နှုန်းအတိုင်း ဆောင်ရမှာပဲ" ဟု ၎င်းကဆက်လက် ပြောကြားသည်။
ထိုသို့ သတ်မှတ်ရခြင်းမှာ လက်ရှိတွင် အိမ်ခြံမြေဈေးနှုန်းများ အဆမတန် မြင့်တက်မှုကို ထိန်းချုပ်ရန်နှင့် နိုင်ငံတော်သို့ အခွန်ပေးဆောင်မှုကို မှန်မှန်ကန်ကန် ဖြစ်စေရန် ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ၎င်းကဆက်လက် ပြောပြသည်။
"အခုလို မြို့နယ်အလိုက် မြေဈေးနှုန်း သတ်မှတ်မယ်ဆိုရင် ပိုကောင်းတာပေါ့။ ဈေးနှုန်းကို ပိုတင်လို့လည်း မရဘူး။ ဆွဲချထားလို့လည်း မရဘူး။ ဒါပေမဲ့ အရောင်းအ၀ယ်က အေးသွားမယ် ထင်တယ်" ဟု estate myanmar အိမ်ခြံမြေ အကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းမှ ဦးဟိန်းမိုးမြင့်လွင်က ဆိုသည်။
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 9/02/20130အကြံပြုခြင်း
မြန်မာမျက်စိနဲ့ ကြည့်တယ်ဆိုရင်တော့ အတော်ကို ရင့်သလို
အမေရိကန်က အင်္ဂလိပ်ကုို ခွင့်တောင်းတယ် ။ ကျနော့်ခြေထောက် ၂ဖက် စားပွဲပေါ် တင်လုို့ ရပါသလား ... တဲ့ ။
အင်္ဂလိပ်က “၄ဖက်စလုံး တင်လုို့ ရပါတယ်” ...လုို့ ပြောလုိုက်တယ် တဲ့ ...။
မရှင်းမလင်း ရှိနေဆဲ မြန်မာတရုတ် နယ်ခြားမျဉ်း
တစ်လက္မမှ အပါမခံဟု ကြုံးဝါးသော်လည်း ဘယ်တစ်လက်မကို ဆိုလိုချင်မှန်း မရှင်းမလင်း ရှိနေဆဲ မြန်မာတရုတ် နယ်ခြားမျဉ်း
တရုတ်-မြန်မာနယ်စပ်ဒေသမှာ အတည်တကျမရှိခဲ့ဘဲ ၎င်းဒေသကို တရုတ်လူမျိုး
သော်လည်းကောင်း မြန်မာလူမျိုးသော်လည်းကောင်း မပေါက်ရောက်ခဲ့ချေ၊၊ အရှေ့ 
တောင်အာရှဒေသများ၏ နယ်မြေထုံးစံအတိုင်း ၎င်းဒေသကို မည်သူမျှ ၀င်ရောက်စွက်
ဖက်ခြင်းမပြုဘဲ စည်းခြားနယ်မြေအဖြစ်သာ သတ်မှတ်ခဲ့ကြသည်၊၊
ထိုအလေ့အထမှာ အင်္ဂလိပ်တို့ မြန်မာပြည်ကို သိမ်းပိုက်ပြီးနောက်ပိုင်း နယ်မြေအတိ
အကျသတ်မှတ်ရန်လိုအပ်လာခဲ့သည်၊၊ သို့သော် ၁၉၃၀ အထိ ၎င်းဒေသများသို့ အင်္ဂ
လိပ်အစိုးရ သြဇာမသက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပေ၊၊ အကြောင်းမှာ ဒေသခံများက အင်္ဂလိပ်တို့၏
အာဏာစက်ကို လက်မခံခဲ့မှုကြောင့် ဖြစ်သည်၊၊ နယ်နမိတ်သတ်မှတ်ရေး အတွက်
၁၉၃၀ မှာစတင်ဆွေးနွေးခဲ့ပြီး ၁၉၄၁ မှာ ၀ ပြည်နယ်သတ်မှတ်နိုင်ခဲ့ပေမယ့် အဲဒီအချိ်န်အထိ
မြောက်ပိုင်း နယ်နမိတ် ကိုအတည် မပြုနိုင် ခဲ့ပါ၊၊ တရုတ်ပြည် အစိုးရသည် လည်း
မန်ချူး - ပြည်ထောင်စု -ကွန်မြူနစ် စသည်ဖြင့် အပြောင်းအလဲများခဲ့သောကြောင့်
စဉ်ဆက်မပြတ်ဆွးနွေးရန် ခက်ခဲခဲ့ခြင်းဖြစ်နိုင်သည်၊၊ ကွန်မြူနစ်အစိုးရဆိုလျင် ၀ပြည်
နယ်နမိတ်ကိုပင် သဘောမတူ ခဲ့ချေ၊၊ သို့သော် မြန်မာဘက်မှ အင်္ဂ လိပ်ခေတ် က
သဘောတူညီချက်ကို တဖက်သက် အတည် ယူပြီး ယနေ့အချိန်ထိ အခိုင်အမာ ငြင်းခဲ့သည်၊၊
မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ တရုတ်ဘက်မှ တောင်းဆိုချက်များသည် မြန်မာ နိင်ငံမြောက်
ပိုင်း မြစ်ကြီးနားမြို့ မှအနောက်ဘက် အန္ဒိယနယ်နမိတ် အထိပါဝင်သည်၊၊ တရုတ်တို့က
၁၆ ရာစု မင် မင်းဆက် နယ်မြေအရ ခမ်းတီး ၊ ပူတာအို လွင်ပြင်တို့မှာ တရုတ်နိုင်ငံပိုင်
ဖြစ်သည်ဟုဆိုသည်၊၊ သို့သော် အင်္ဂလိပ် ရုက္ခ-ပထ၀ီဝင်ပညာရှင် F.K.Ward က နှစ်ဦး
နှစ်ဖက်မည်သူမျှမပိုင်ကြောင်း ဆိုသည်၊၊ မြန်မာဘက်မှ အဆိုပြု ချက်မှာမူ အင်္ဂလိပ်
ခေတ် လွပ်လပ်ရေးရစဉ်အခါက နယ်နမိတ်အတိုင်းပင်ဖြစ်သည် ဟူ၏၊၊
၁၉၅၆ ခုနှစ်တွင် ဆိုင်နို-ဗားမား နယ်နမိတ်ပြဿနာ ပိုမိုကြီးထွား လာခဲ့သည်၊၊ တရုတ်
ကွန်မြူနစ်တို့ ပြည်မမှဆုတ်ခွာ၍ လာအိုနှင့် မြန်မာနယ်စပ်တွင် တပ်စွဲထားသောအချိန်
ဖြစ်သည်၊၊ ထို့ကြောင့် ၁၉၆၀ တွင် အပေးအယူတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့ရသည်၊၊ ၎င်းမှာ မြန်မာ
ပိုင် ဖီးမော်၊ ဂမ်လမ်၊ ကန်ဖန် ဒေသ (စတုရန်းမိုင် ၁၃၂) ကို တရုတ်ထံသို့ တရားဝင်
လွှဲပြောင်း ပေးခဲ့သည်၊၊ ယခင် တရုတ်နှင့် ဗမာ နှစ်နိုင်ငံကြား ဒေသအဖြစ်သဘောတူ
ထားသော နမ်ဝါ (စတုရန်းမိုင် ၈၅) ကို မြန်မာတစ်ဦးတည်း ပိုင်အဖြစ်သတ်မှတ်သည်၊၊
international boundary study #42
Novermber 30, 1964
သတိ ! အ မှိုက် များ ကို ရေ ထဲ သို့ ရောက် အောင် ပစ် ကျ ပါ ရန်
Saturday, 31 August 2013 03:29
မ.....(၁၆) နှစ်သည် အရက်သောက်၊ ခင်ပွန်းဖြစ်သူနှင့် စကားများရန်ဖြစ်၊ ရဲတစ်ဦး အဓမ္မပြုကျင့်၊အပြန်အလှန် ရိုက်နှက်မှုဖြစ်၊
Monday, 02 September 2013 06:46
သတိ ! အ မှိုက် များ ကို ရေ ထဲ သို့ ရောက် အောင် ပစ်...
ရန်ကုန်မြို့တွင် Day Club များ လုံးဝမဖွင့်ရန် ညွှန်...
မ.....(၁၆) နှစ်သည် အရက်သောက်၊ ခင်ပွန်းဖြစ်သူနှင့် ...